प्रहरी नै चलाउँछन् चोरीका गाडी
Fri, Jul 20 2018 शुक्रवार, श्रावण ४,२०७५
शिवराज भट्ट / बीपी अनमोल आइतवार, श्रावण २९, २०७४
2075 पटक पढिएको
खोजी थियो, चोरीको गाडी बिक्री गर्ने गिरोहको । तर, खोतल्दै जाँदा प्रहरीकै उच्च अधिकृतहरू नै त्यस्तो गाडी चढ्ने गरेको खुलासा भएपछि नेपाल प्रहरी अहिले सकसमा परेको छ । कञ्चनपुर प्रहरीले कैलाली, भजनीका गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ र भीमदत्त नगरपालिका ४ का हिमालय जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो, ४ साउनमा । तिनलाई आरोप थियो, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा किर्ते काजजात बनाइ महँगा गाडी दर्ता गराएर बिक्री गरेको । तिनलाई गिरोहको मुख्य नाइके भनी प्रचार गरियो ।
तर, यस घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा नेपाल प्रहरीका एक डीएसपीले हवल्दारको नाममा दर्ता गरी कार चढिरहेको पाइयो । उता दुई प्रहरी निरीक्षक, एक जना सई, असई र हवल्दार तथा अन्य धेरै प्रहरी जवानले चोरीका गाडी किनेर चढेको पाइएपछि प्रहरीभित्र पहिरो गएको छ, यतिबेला । प्रहरीले अहिलेसम्म किर्ते कागजात बनाएर बिक्री गरेको आठ वटा कार र २६ मोटरसाइकल बरामद गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका डीएसपी सुदीप पाठकले प्रहरी हवल्दार ताराबहादुर ठकुल्लाको नाममा से १ च १८१० नम्बरको चोरीको हुन्डाई क्रेटा कार दर्ता गरी किनेको खुलासा भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी अधिकृत दीपक पातली, अधिकृत जनकराज ढुंगाना, सई लोकराज भट्टले श्रीमती कविता शर्माको नाममा चोरीको बुलेट मोटरसाइकल किनेर चढेका छन् ।
अनुसन्धान टोली नै चोरीमा
अपराध अनुसन्धानका लागि भनेर डीआईजीले आफैं गठन गरेको रिजनल इन्भेस्टिगेसन टिम (आरआईटी) का असई केशव जोशी, प्रहरी हवल्दार केशवसिंह ऐरी, आरआईटीका प्रहरी जवान धर्मसिंह भाटले रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल र पदमसिंह धामीले अपाची मोटरसाईकल किनेका छन्, ती सबै चोरीका हुन् । यसरी आफैंले गरेको अप्रेसनमा आफ्नै ‘डिपार्टमेन्ट’ मुछिएपछि प्रहरी सकसमा परेको हो ।
डीआईजीले आफैँ गठन गरेको रिजनल इन्भेस्टिगेसन टिम (आरआईटी)ले चोरीका मोटरसाइकल किनेका छन्।
प्रहरीले पक्राउ परेको गाडी नम्बरबारे जानकारी दिँदै प्रारम्भिक पत्रकार सम्मेलन त गर्‍यो । तर, ती कसका नाममा छन् ? त्यसपछिको अनुसन्धानको रिपोर्ट भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । जबकि, नेपाल प्रहरीले मात्रै होइन, सशस्त्रका डीएसपी हर्क पन्त, निलम्बनमा परेका महाकाली अञ्चल यातायातका निमित्त प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंहका सालाकी श्रीमती संगीता सिंह, यातायातका धेरै कर्मचारीले किर्ते कागजात बनाई कार किनेको खुलासा भएको छ ।
कसरी भित्रिन्छ चोरीका गाडी
प्रहरी सूत्रअनुसार टीकापुरमा मोटरसाइकल वर्कसप सञ्चालन गर्ने गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ चोरीका गाडी यातायातमा किर्ते कागजात बनाई बिक्री गर्ने मुख्य योजनाकार हुन् । कञ्चनपुरमा उनका सहयोगी हिमालय जोशी छन् । गोकुलले अहिलेसम्म किर्ते कागजात बनाई कति गाडी बिक्री गरे भन्ने यकिन तथ्यांक प्रहरीसँग छैन ।
तर, सेती र महाकाली यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी ढड्डा हेर्दा आधाभन्दा बढी कार र मोटरसाइकल गोकुल र हिमालयले बिक्री गरेको देखिन्छ । उनीमार्फत् बिक्री भएका आठ कार र २६ मोटरसाइकल मात्र जिप्रका कञ्चनपुरले पक्राउ गरेको छ । हिमालय भारतको उत्तराखण्ड हल्द्वानीमा पनि गाडी चोरेको आरोपमा भारतीय प्रहरीको वान्टेड सूचीमा छन् ।
मध्य र सुदूरपश्चिममा नेपाली भन्सारलगायत सरकारी अड्डाका गाडी टेन्डरमार्फत् लिलाम बढाबढ हुँदा अरूभन्दा बढी मोल राखी गोकुलले टेन्डर पार्ने गरेका थिए । उनले आफूलाई परेको हरेक टेन्डरमा कम्तीमा दुईदेखि चार–पाँच गाडी नयाँ घुसाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कञ्चनपुरका एसपी प्रकाश चन्द भन्छन्, ‘गोकुलले टेन्डरमा परेका गाडीको स्थानमा भारतबाट चोरी गरेर ल्याएका नयाँ गाडीको इन्जिन र चेसिस लेखेर, किर्ते गर्ने गरेका छन् ।’ एसपी चन्दका अनुसार लिलाम स्वीकृत भएको अड्डाको कागजमा पुरानो गाडीको नम्बर मेटाइन्छ र त्यसमा भारतबाट ल्याइएको चोरीको नयाँ गाडीको त्यही फन्ट र साइजमा कुनै फरक नदेखिने गरी इन्जिन र चेचिस नम्बर टाइप गरी यातायातमा किर्ते बनाएर लगिन्छ ।
तीन भारतीय पनि संलग्न
गोकुललाई भारतबाट नयाँ गाडी चोरेर ल्याउने धन्दामा सहयोग गर्ने भारत लखिमपुर–खिरीका जानी खान, आलोक श्रीवास्तव र हरपीत शहनी पनि रहेको प्रहरीको दाबी छ । नेपालमा थोत्रा गाडीको लिलाम गोकुलले सकार्छन्, अनि भारतबाटले चोरेर ल्याइएका नयाँ गाडीमा इन्जिन र चेसिस नम्बर नेपालमा लिलाम बोलिएको कागजातमा पेस्ट गरिन्छ । नेपालमा करिब ४० लाख पर्ने गाडीलाई आधा मोलमा बिक्री गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले पक्राउ परेको गाडी नम्बरबारे जानकारी दिँदै प्रारम्भिक पत्रकार सम्मेलन त गर्‍यो। तर, ती कसका नाममा छन् ? त्यसपछिको अनुसन्धानको रिपोर्ट भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिमका डीआईजी रोमिन्द्र देउजाले गठन गरेको रिजनल इन्भेस्टिगेसन टिम (आरआईटी)ले जेठमा भारतीय नागरिक आलोक श्रीवास्तवलाई कैलालीको अत्तरियाबाट दुई वटा हुन्डाई र होन्डा सिटी कारसहित पक्राउ गरेको थियो । तर त्यसबेला गोकुल र श्रीवास्तवको यो धन्दा थाहा नपाएकाले लावारिस देखाउँदै आरआईटीले छोडेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
गाडीबिनै कागजात बनाउन यातायातका कर्मचारीले सघाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ । यातायातको ढड्डा नै गोकुलले कार्यालय बाहिरको परिसरमा आफैं लेख्ने गरेको त्यहाँ रहेका अरू दलाल बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यालयले कम्पनीको एजेन्ट भन्दै सवारी दर्ता रजिस्टर नै थमाइदिएपछि उनीहरूले मन परेको इन्जिन र चेसिस नम्बर लेखेर गाडी आफ्नो नाममा बनाउँछन्,’ नाम नबताउने शर्तमा ती दलालले भने ।
छानबिनमा यातायातका कर्मचारी
यातायात व्यवस्था विभागले महाकाली अञ्चल यातायात कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित सात जनालाई ५ साउनदेखि दुई महिनाका लागि निलम्बन गरेर अनुसन्धान थालेको छ । भारतबाट भित्र्याइएका चोरीका गाडी दर्ता गरेर सञ्चालनको अनुमति दिएको भन्दै निमित्त कार्यालय प्रमुख हेमन्तबहादुर सिंह, मेकानिकल इन्जिनियर दीपक थापा, नासुहरू नरेन्द्रराज जोशी, तारादत्त भट्ट, महादेव भट्ट र केशवदत्त बडु र खरिदार श्यामराज ओझा निलम्बनमा परेका छन् । भारतबाट ल्याइएका त्यस्ता गाडी दर्ता गरेर सञ्चालनको अनुमति दिने काममा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी नै संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि विभागले उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो ।
मुख्य नाइके अरू नै देखिन्छ
एक दिन भीमदत्त नगरपालिकाका मेखराज सुनारले किनेको म१च ५१३ नम्बरको गाडी नक्कली हो भन्ने खबर आयो । म आफंै यातायात गएर सवारी दर्ताको रजिस्टार हेर्दा सो गाडी गोकुलले बिक्री गरेको पाइयो । सुनार समातिए, उनबाट धेरै कुरा खुल्यो । मेखराजले हिमालय जोशीबारे जानकारी दिए । जोशीको घरबाट उनीसहित दुइटा कार जिप्रका ल्याइयो । यसलाई संयोग भन्नुपर्छ, हिमालय मसँगै हुँदा गोकुलको फोन आयो, मैले विभिन्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर उसको ‘लोकेसन’ पत्ता लगाएँ । थाहा पाएर लुक्दै भागे पनि हिमालयको सहयोगले उसलाई बुटबलबाट गिरफ्तार गरियो ।
यो गाडी चोरीको ठूलै गिरोह हो । दुइटा बुलेट मोटरसाइकल पोखराका व्यक्तिले किनेका रहेछन्, उनीहरू आफंैले खबर गरेका छन् । धेरैले चोरीका गाडी भन्ने थाहा नपाएर किनेका छन् भने कतिपयले थाहा पाएर पनि किनेका छन् । यातायातका कर्मचारीलाई त यत्तिको बेथिति हुँदासम्म थाहा नहुने कुरै भएन ।
यो गिरोहले भन्सारको प्रज्ञापन पत्र पनि जस्ताको तस्तै बनाउने गरेको खुलेको छ । यातायात गई सक्कली ब्लुबुक त धेरैले बनाएका छन् । यस गिरोहले नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा किनबेच गरेको पनि चाल पाएको छु । त्यसमा पनि अनुसन्धान हुनेछ । गोकुलले पश्चिमतिरको कमान्ड मात्रै गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य नाइके अरू नै देखिन्छ । खोजपड्ताल अझै बाँकी छ ।
समस्यामा पत्रकार महिला मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४
स‍ंसद : मध्यम माननीय सोमवार, कार्तिक १३, २०७४
थाङ्कामा नलेखिएको जीवन आइतवार, कार्तिक १२, २०७४